Ampahany tsirairay - Church of God World Switzerland
lahatsoratra > Day-by-Day > Piece per piece
Rehefa mieritreritra ny hanome ny foko ho an'Andriamanitra dia toa mora loatra izany ary indraindray mieritreritra aho fa afaka manamboatra azy io mora kokoa noho izy koa isika. Hoy izahay: "Tompoko, omeko anao ny foko" ary mieritreritra izahay fa izany ihany no ilaina.
« Dia namono ny fanatitra dorana izy; ary nentin'ny zanak'i Arona ho eo aminy ny rà, dia natopiny manodidina tamin'ny lafin'ny alitara izany. Dia nentin'ny olona teo aminy ny fanatitra dorana notapatapahina mbamin'ny lohany, dia nandoro izany ho fofona teo ambonin'ny alitara izy.»3. Mosesy 9,12- iray).
Tiako haseho anao fa ity andininy ity dia mifanitsy amin'ny fibebahana izay tian'Andriamanitra ho antsika koa.
Indraindray rehefa miteny amin'ny Tompo isika dia eto ny foko, toy ny manipy azy eo alohany izy. Tsy izany no tiana hambara. Rehefa manao an'io fomba io isika dia tena manjavozavo ny fibebahantsika ary tsy miala amin'ny fihetsika feno ota isika. Tsy manipy sombin-kena fotsiny isika ao anaty vilany, raha tsy izany dia tsy ho endasina miaraka. Toy izany koa ny fontsika mpanota, tsy maintsy mahita mazava izay hialana isika.
Nomena azy tsirairay ny sorona dorana manontolo, anisany ny lohany, ary nodorany ho fofona teo ambonin'ny alitara izany. Te hifantoka amin'ilay zava-misy fa ny zanakalahin'i Aaron roa nanolotra azy tsikelikely ilay tolotra. Tsy natsipiny tany ambony ilay biby manontolo, fa nametraka sombin-javatra sasany teo ambonin'ny alitara.
Mariho fa ny zanakalahin'i Arona roa dia nanome ny sorona tsirairay isaka ny rainy. Tsy nametraka tsotra izao ilay biby novonoina teo ambonin'ny alitara izy ireo. Tsy maintsy manao toy izany koa amin'ny sorona ataontsika, amin'ny fontsika isika. Raha tokony hiteny hoe "Tompoko, eto ny foko," dia tokony homen'Andriamanitra ireo zavatra mandoto ny fontsika ireo. Tompo omeko anao ny fifosafosako, omeko anao ny filako ao am-poko, apetrako aminao ny fisalasalako. Rehefa manomboka manolotra an'izao ny fontsika amin'Andriamanitra isika dia ekeny ho sorona izany. Ny zava-dratsy rehetra eo amin'ny fiainantsika dia avy eo lasa lavenona eo amin'ny alitara, izay hitsoka ny rivotra avy amin'ny Fanahy.